ONLF oo soo dhaweysay go&#039;aanka Somaliya ee liiska argagix... | Universal Somali TV
ONLF oo soo dhaweysay go'aanka Somaliya ee liiska argagixisada looga saaray
Ururka ONLF ayaa soo dhaweeyay mowqifka Xukuumadda Somaliya ee shan sano ka dib ururkooda looga saaray liiska argagixisada.
Golaha Wasiirada Somaliya ayaa Axaddii laalay go'aanka xukuumaddii hore ee ONLF loogu daray liiska argagixisada, sanadkii 2017.
Cabdulqaadir Xasan Hirmooge (Caddaani), Afhayeenka Ururka ONLF ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada ay qaaday Xukuumadda Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, inkastoo sida uu sheegay ay u arkaan go'aan waqtigiisii ka daahay.
"Go'aankan waa go'aan aan soo dhawaynayno weeye, go'aan waqtigiisii ka daahay oo in badan la sugayay bay ahayd. Xukuumaddii hore muddo badan bay ballanqaaday inay go'aankaa ka noqon doonto, waxna sixi doonto, balse ay ku dhici weyday." Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka ayaa yiri "Go'aankii hore waa mid taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed ceeb ku ah, shacbiga Soomaaliyeed-na ceeb ku ah, halgankayagiina gardaro ku ah, dowladnimada, calanka iyo madaxbannaanida Dowladda Soomaaliyeed-na khalad ku ah."
Hirmooge ayaa intaasi raaciyay "Marka wax la saxay baan u aragnaa, waana soo dhawaynaynaa, Ra'iisal Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiiradana aad baan ugu mahad-naqaynaa, go'aanka geesinimada leh ee xaqa ugu lahayn."
Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa si diiran u soo dhaweeyay go'aanka xukuumadda ay ONLF uga saartay liiska argagixisada, khalad-na ay ugu tilmaamtay dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi-dhagax.
Kan-xigaFBI-da Mareykanka oo baareysa Soomaal...
Kan-horeGuddiga Doorashada Puntland oo shaaci...
65,221,359 unique visits